XFCE: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19? | Laga soo bilaabo Linux
Ku saabsan isaga Deegaanka XFCE Desktop waqti ka waqti, waxaan sidoo kale ka faalloonaa wararkooda ugu dambeeyay (4.16, 4.14, 4.12, kuwa kale), ama qaarkood theme Isaga oo is garaacaya, ama a app xiiso leh loogu sheegay Deegaanka Desktop.
Marka loo eego Beeshaada:
"XFCE waa jawi desktop fudud oo fudud oo loogu talagalay nidaamyada u eg UNIX. Hadafkeedu waa inuu ahaado mid dhakhso badan oo adeegsada waxyaabo yar oo nidaam ah, iyadoo muuqaal ahaan soo jiidasho leh oo si fudud loo isticmaali karo.". Beesha XFCE (www.xfce.org)
Intaa waxaa dheer, waxay muujinayaan in:
"XFCE waxay xambaarsan tahay falsafada soo jireenka ah ee UNIX ee qaab dhismeedka iyo dib u adeegsiga. Waxay ka kooban tahay barnaamijyo taxane ah oo bixiya dhammaan waxqabadka aad ka filan karto jawiga casriga casriga ah. Iyaga ayaa si gooni ah loo baakadeeyay waxaana laga dooran karaa baakadaha la heli karo si loo abuuro jawi shaqsiyeed oo fiican oo shaqo". Beesha XFCE (www.xfce.org)
1 Dhammaan wixii ku saabsan XFCE
Dhammaan wixii ku saabsan XFCE
Mashruucu waa XFCE ayaa la bilaabay intii lagu jiray sano 1996. Ahaanshaha laamaheeda dambe ee xasilloon ee la sii daayay sannadaha soo socda: 1998 (XFCE 2), 1999 (XFCE3) iyo 2003 (XFCE4).
Xilligan isaga ugu dambeeya nooca xasiloon waa XFCE 4.14 iyo nooca horumarinta nooca XFCE 4.16.
XFCE Badanaa waxaa loo arkaa inay tahay bedelka ugufiican ee duug ah, laakiin miisaanka fudud, fudud oo shaqeynaya GNOME2, kaas oo lagu beddelay mid casri ah laakiin culus, kakooban oo adag GNOME3.
Waxay ku leedahay magaceeda, XFCE, maxaa yeelay bilowgii wuxuu ku salaysnaa wixii la yaqaan XForms Nidaamka Guud. Waqtigaan la joogo, xarfaha bilowgeedu mar dambe lama xiriiraan wax, inkasta oo ay saameyn ku leedahay magaca Ingiriisiga soo socda: X Deegaanka Kolestaroolka Bilaashka ah.
Waa a Deegaanka Desktop in kastoo sanado badan si tartiib tartiib ah ayuu isu beddelaa si tartiib tartiib ah, oo ay ugu wacan tahay koox yar oo ka mid ah barnaamijyada iyo wada-hawlgalayaasha aad isbarbar dhigtay GNOME iyo KDE Plasma. Taas oo ka soo horjeedda sumcadeeda sii kordheysa iyo koritaanka bulshada isticmaaleheeda.
Wuxuu hayaa a muuqaalka aasaasiga ah ee caadiga ah waqti ka dib si fudud loo isticmaalo loona barto, si dhakhso leh oo fududna loo qaabeeyo, iyo waliba hagaajin iyo qurux.
Hadda waxaa lagu dhisay Qalabka GTK3.
Waxay bixisaa a dheelitirka fiican inta udhaxeysa xawaaraha, xasiloonida iyo qaabeynta.
Si ballaaran loo isticmaalay sida Degaanka desktop-ka oo ah Default in badan Distros.
Muy la hagaajin karo oo khafiifa, gaar ahaan heerka Guddiga iyo Desktop-ka iyada oo loo marayo dejinta iyo aaladda (waxyaabaha wanaagsan).
Iswaafajinta asaliga ah ee barnaamijyada GNOME maxaa yeelay labaduba way istcimaalaan GTK +. In kasta oo ay aad u socon karto Codsiyada KDE Plasma haddii lagu rakibo qaab ugu yar maktabadaha lagama maarmaanka u ah, Nidaamka Howlgalka.
Nidaamka deegaanka ee fudud laakiin leh codsiyo wanaagsan, in kastoo aysan badiyaa ahayn kuwo aad u adag (horumarsan).
Kooxda shaqada yar iyo taageerada urureed ee yar, laakiin waxay leedahay beel weyn oo Users ah oo koritaan buuxa leh.
Ma taageeri qaababka badan sida Degaanada kale ee loo yaqaan 'Desktop Environments' sida Cinnamon ama MATE, laakiin waa mid xasiloon oo aad u yar isticmaalka kheyraadka.
para wax dheeri ah baro Waxaad booqan kartaa degelkeeda rasmiga ah:
Bogga rasmiga ah ee mashruuca XFCE
Xagee ka heli kartaa taada Wiki, Dukumiintiyada, Mashaariicda (Qeybaha iyo Codsiyada), eeg wararkeeda iyo liiska isbeddelada, iyo waxyaabo kale oo badan. Xiriirimaha soo socda ayaa sidoo kale la heli karaa si loogu kabo macluumaadka ku saabsan XFCE:
Simon's Blog qarsoodi ah
DEBIAN Wiki on XFCE
Arch Wiki oo ku taal XFCE
Xullo Deegaanka XFCE Desktop iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Dib u bilow oo soo gal adoo dooranaya Deegaanka Desktop XFCE, haddii ay dhacdo inaad haysato wax ka badan hal Deegaanka Desktop rakibay oo aanad dooran Maamulaha Soo-galidda Lightdm.
Nota: Ka dib markii la tijaabiyo Deegaanka XFCE Desktop rakibay, waad rakibi kartaa barnaamijyo dheeri ah oo dheeri ah iyo waxyaabo muhiim ah isku mid ah, sida, tusaale ahaan:
Xusuusnowna, kani waa kan boostada saddexaad taxane ah oo ku saabsan Goobaha GNU / Linux Desktop. Kan hore wuxuu ku saabsanaa GNOME, labaad oo ku saabsan KDE Plasma, iyo kuwa soo socdaa waxay ku saabsan yihiin Qorfe, MATE, LXDE iyo ugu dambayntii LXQT.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entorno de Escritorio» lagu yaqaan magaca «XFCE», taas oo ka mid ah kuwa badan ee jira, kuwa ugu dhameystiran dhexdooda kuwa fudud iyo tan seddexaad ee ugu doorbidida badan waqtigaan adduunka «Distribuciones GNU/Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » XFCE: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
Kali Linux 2020.1 waxay la timid isbeddello qaarkood, oo ay ka mid yihiin galitaanka
Waxaa lasii daayay nooca cusub ee Lakka 2.3.2, oo ah ikhtiyaar aad ufiican oo loogu talagalay cayaaraha dugsiyadii hore